Home Wararka Ubax Tahliil oo looga adkaaday kursiga HOP 60
Waxaa goor dhoweyd magaalada Gaalkacyo kusoo gabgaboobay Wareegii labaad doorasho si adag loogu tartamay oo dhex martay afar musharax oo haween ah kursiga HOP060.
Doorashada kursiga HOP060 oo la furay ayaa keentay inuu xiiso gaara yeesho oo tartan adag ka dhaco, waxayna natiijadii wareegga koowaad noqotay sida soo socota:
1- Ubax Tahliil Warsame : Waxay heshay 44 cod.
2- Hodan Cabdullaahi Shire: Waxay heshay 17 cod.
3- Qaali Cali Shire: Waxay heshay 32 cod
4- Ayaan Xuseen Xasan (Wacan): waxay heshay 8 cod.
Wareegga labaad waxaa u gudbay Ubax Tahliil Warsame iyo Qaali Cali Shire oo wareegga labaad ku kala bixi doono 50+1., iyadoo doorashadu ay tahay mid adag.
Waxaana wareeggii labaad ku adkaaday Qaali Shire waxaana Ubax Tahliil oo aay wadatay Villa Somalia halkaa ka soo gaaray Guuldarro weyn
Previous articleUbax Tahliil oo xaal ka ku xunyahay & Doorashada oo hakad la geliyay
Next articleMastercard iyo Visa oo joojnaya adeegyadooda Ruushka
Puntland oo gacanta ku dhigtay shabakad fulisa dilalka qorsheysan
(Dhageyso) Wasiirka arrimaha dibedda Soomaaliya oo Kenya ku eedeeyay ku xadgudub...